Warshad Sameeyaha Sameeyaha, Shirkado - Shirkado Soosaarayaasha Sameeyaha Wejiga Shiinaha
Logo Custom Matte lipgloss Long waarta 40 midabo Li ...
Makeup makeup Primer oo kufiican dhamaan noocyada maqaarka Matte ...
Astaanta Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida 14 ...
OEM Automatic suni qalin siman Macdanta dabiiciga ah ...
Aasaaska Liquid Jumlada 8 midab Miisaanka ...
Matter Liquid aan saliil lahayn oo aasaaska Liquid dabool buuxa ...
Caymiska buuxa ee dhammaystirka dareeraha 6ml ee dhammaystirka matte 16 h ...
Caymis buuxa oo 6ml qarsoodi ah oo biyo shuban ah oo leh ...
OEM Face Make-up Fixer spray 120ml Qoyaanka saliida ee xakamaynta Miisaanka Microfine ceeryaamo Dejinta Buufin
Maxaad ugu baahan tahay Dejinta buufin? Sunta buufintu waxay kaa caawin doontaa hoos u dhigida heerkulka wajiga, iyadoo ka caawin doonta qurxinta inay in badan u ekaadaan maqaarka. 2. Meel qurxinta ku shaabadee. Marka maqaarka wajigu qaboobo oo qurxinta dhegta dheereyso, way fududaanaysaa buufinta goobta inay ku xirto qurxinta meesha. Waa maxay ? Buufinta qalabka wax lagu qurxiyo ee wajiga ayaa ah hubkaaga qarsoodiga ah ee wejiga aan iin lahayn. Foormulada waxaa ku jira aloe, shaah cagaaran, Qajaar, iyo fiitamiinnada A, C, iyo E si ay maqaarka u dajiyaan una u fuuq baxaan. Ku buufi burushkaaga ama ...
Caymis buuxa oo fuuq-baxa 6ml oo qarsoodi ah oo Matte ah oo leh dhammaystir Matte oo bixiya Maalintii oo dhan Duugga Qurxinta muddada dheer
Caymiska Fududeeyaha Haydarooliga ee J202A Waxay maqaarkaaga siinaysaa kor u qaadista fuuq-baxa loogu talagalay dhammaystirka satin-ka ee aan daarneyn. Waana daboolid heer sare ah, muddo dheer xidhan oo ku habboon in la qariyo kuwa indhaha ka hooseeya guduudasho iyo dhibco jilicsan.
Caymiska buuxa ee dareeraha dareeraha ah ee 6ml dhammeystiraysa 16 saacadood oo qarsoodi ah oo qurxiyo leh oo tayo sare leh
Caymiska buuxa Matte dareeraha qarinaya J202 oo ah dabool buuxa, 16-saacad xidhashada dharka kaas oo qarinaya, saxaya, dusha sare iyo waxyaabaha muhiimka u ah maqaarka aan cillada lahayn.
Matter Liid la'aan saliid-liidasho Aasaaska Bixinta caymiska buuxa 20ml aasaaska qurxinta ee waara oo leh SPF15
Aasaaska dareeraha ah ee aan nadiifka ahayn J203 waa caymis buuxa, miisaan fudud, qaababka caanaha aan saliida lahayn marka loo eego iskudhafka si dabiici ah maqaarka loogu talagalay dhamaadka semi-matte qurux badan oo soconaya maalinta oo dhan, Waxay ka caawisaa hagaajinta maqaarka maqaarka aan sinnayn waxaanan leenahay 40 hoos , waxay si fiican ugu habboon tahay dhammaan noocyada maqaarka.
Aasaaska Liquid Jumlada 8 midab oo miisaankeedu yahay 30ml oo leh kareem dabiici ah oo dabiici ah iyo Foormulada qoyaanka
Mu'asasaddan dareeraha ah ee silkku waa culeys la'aan, jilicsan jilicsan, muuqaal ku jirta caanaha lagu qoyo, waxay kaa caawin kartaa sameynta aaladda aasaasiga ah ee kareemka mana noqon doonto mid been abuur ah inta wajiga la gashanayo.
Waxyaabaha Lagu Sameeyo Label Iskudhafka Ah ee Biyaha Macdanta Leh ee Fudud Oo 5 Midab Leh Cheek Blusher makeup makeup blush Palette
Waa maxay ? Midabkan jilicsan ee jilicsan ee jilicsan ayaa keena midab dhismo oo soconaya muddo dheer diiradda jilicsan. Lakab ka saraysa aasaaska iyo qarinta ama kali u xidho muuqaalka biyo qabatinka kaamil ah. Xashiish budada cushiony leh maaddooyinka maqaarka u fiican oo bixiya midab dabiici ah oo la dhisi karo. Waxay bixisaa saameyn jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo muuqaal leh. Shayga NO J0207 Brand Jinfuya ama Samee Maqaarkaaga Maaddada Nadiifka ah ee Macdanta ah, caanaha midabka leh Ku habboon badanaa wuxuu u dhigmaa ...
Waxyaabaha loo yaqaan 'Makeup Base Primer' oo ku habboon dhammaan noocyada maqaarka Matte Finish Mineral Infused Face Primer ee Abuurista Sal siman
Waa maxay ? Macdanta Wajiga Koowaad waa hubkaaga qarsoodiga ah ee wejiga aan iin lahayn. Markii la mariyo ka hor qurxintaada, salkaani wuxuu wajigaaga ka siin doonaa mid u eg ilmaha, dhammaysnaanta maatida dabiiciga ah inta ay la dagaallamayso saliidda iyo qallaylka Waxay u oggolaaneysaa aasaaskaaga inuu shaqadiisa qabsado oo uusan ku dhegin meelo khaldan intaad ka diyaarinayso palette (wajiga) budada fudud ama qurxiyo buuxa - adigu waad go'aansatay. Jinfuya waxaa loo qaybiyaa si looga dhigo tan ugu fiican ee quruxda inay heli karto isha, dibnaha, iyo wejiga kasta. Asalkaaga ayaa ah mid aan la koobi karin, iyo ...
Muuqaalka muuqaalka muuqaalka muuqaalka muuqaalka muuqaalka muuqaalka muuqaalka sare ee dubista biyaha aan waarayn ee dhalaalaya dhalaalaya midabka maqaarka wejiga dusha sare
Waa maxay ? Palet Highlighter waa qaaciidada jilicsan ee kareemka ah ee loo yaqaan 'Kaleidoscope palette' oo ku dul duulaya maqaarka isla markaana ka jilciya dusha sare ee ka soo horjeeda si loo xoojiyo. Tani waxay si gaar ah ugu qanacsan tahay maqaarka qaangaarka ah maaddaama qaaciddada aysan xoojin doonin khadadka ganaaxa iyo daloolada Shayga NO J2222 Brand Jinfuya ama Samee Shahaadadaada Calankaaga ah 100% dabiici ah oo hodan ku ah maaddooyinka dabiiciga ah ee kala duwan. La sameeyay iyadoo aan lahayn gluten, maadad ilaaliye, iyo midab macmal ah. Ku habboon in lagu helo 4 dabiiciga dabiiciga ah ...